Vivo S1 Prime: elanelam-potoana vaovao misy Snapdragon 665 sy Android 9 Pie | Androidsis
Vivo S1 Prime: elanelam-potoana vaovao misy Snapdragon 665 sy Android 9 Pie
Ny orinasa sinoa Vivo Izy io dia iray amin'ireo marika mavitrika indrindra amin'ny resaka fandefasana telefaona. Taorian'ny nanambarana ny Vivo Y51s vaovao sy ny Vivo Y1s, ny orinasa dia manamafy mpikambana vaovao ao amin'ny tsipika antsoina hoe Miaina S1 Prime aho, fitaovana iray heverina ho midadasika amin'ny alàlan'ny processeur apetrany.
Ny tsy fahombiazan'ny mpanamboatra vaovao dia ny rafitra miasa izay ahatongavany, amin'ity tranga ity dia miaraka aminy Android 9 Pie ao anaty boaty, rindrambaiko iray izay ao ambadiky ny andiany fahafolo. Ny fitaovan'ny fitaovana dia ahafahanao mametraka Android 10 miaraka amin'ny sosona farany an'ny FunTouch OS 10.5, zavatra izay tsy nataonao noho ny antony na antony.
1 Vivo S1 Prime, miresaka momba ilay finday smartphone vaovao daholo
Vivo S1 Prime, miresaka momba ilay finday smartphone vaovao daholo
Miaina S1 Prime aho tonga miaraka amin'ny zava-dehibe Efijery Full HD + 6,38-inch, ny mpanamboatra dia nisafidy takelaka karazana AMOLED ho an'ity maodely ity izay ho tonga ao Burma amin'ny voalohany. Ny orinasa dia mandray ny dingana hisafidianana an'ity karazana tontonana ity, avelany ankilabao ny IPS LCD izay apetaka amina terminal farany ambany.
Ny prime miaraka amin'ny processeur Snapdragon 665 amin'ny hafainganam-pandeha manomboka amin'ny 2,2 GHz ka hatramin'ny 1,8 GHz, mametraka modely RAM 8 GB sy fitehirizana 128 GB izy rehetra, azo alefa amin'ny alàlan'ny MicroSD. Ny bateria dia 4.500 mAh miaraka amina famahana haingana 18W, amin'ny fampiasana charger USB-C hamahana azy.
El Miaina S1 Prime aho apetraho ny sensor efatra any aoriana, ny lehibe dia 48 megapixel, ny faharoa kosa dia singa 8 megapixel ultra-wide, sensor makrozy 2 megapixel ary sensor lalina 2 megapixel. Ny fakan-tsary voalohany dia 16 megapixels ary miasa ho toy ny fakantsary selfie. Izy io dia misy fifandraisana 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS ary NFC.
SCREEN 6.38-inch AMOLED Full HD + (2.400 1.080 x XNUMX teboka)
PROCESSOR Snapdragon 665 8-core 2.2-1.8 GHz
TOERANA FITONDRANA AN-TANY 128 GB - slot MicroSD
CAMERA HATRANY 16 MP sensor
RAFITRA FIKIRAKIRANA Android 9 miaraka amin'ny FunTouch OS 9.2
CONNECTIVITY 4G - WiFi - Bluetooth - GPS - USB-C - NFC
ASA hafa -
DIMENSION SY lanjan'ny: -
El Vivo S1 Prime dia manana vidiny MMK389,800 (240 euro amin'ny fanovana) ao Birmania, tranonkala iray misy azy io izao. Tonga amin'ny loko Jade Black sy Nebula Blue izy io amin'ny voalohany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Android Android » Vivo S1 Prime: elanelam-potoana vaovao misy Snapdragon 665 sy Android 9 Pie
Mi Xia Ultra an'ny Xiaomi dia mandika ny Huawei P10 Pro ho finday miaraka amin'ny fakantsary tsara indrindra ho an'ny rehetra [Review DxOMark]
Ahoana ny fomba hitsitsiana bateria amin'ny tolo-kevitr'i Google